Anosibe` Miafina eny akaikin’ireo mpitondra sarety mpanendaka
Miafina eny akaikin’ireo mpitondra sarety miandry mpanjifa ivelan’ny tsena avokoa ireo mpanendaka eny Anosibe amin’ny ankapobeny.
Tsy mitoby amina toerana iray anefa ireo sarety ireo raha araka ny fanazavan-dRandrianambinina Marcellin, lehiben’ny tsenan’Anosibe fa misy tonga eny amin’ny lalan’ny mpandeha an-tongotra mihitsy, antony mahalasibatra hatrany ireto farany. Roa raha kely ny fitarainana momba ny fahaverezana finday, poketra…ivelan’ny tsenan’Anosibe isan’andro, antony tsy maintsy nandraisan’ireo tompon’andraikitra fepetra. Nisy araka izany ny fametrahana toerana manokana ho an’ny mpitondra sarety izay sady tsy mibahana ny arabe no sady tsy manakorontana ny lalan’ny mpandeha an-tongotra ihany koa. Efa nihena araka izany ireo mpanendaka eny Anosibe ankoatra ny ezaka efa hataon’ny mpitandro ny filaminana amin’ny fitsirihana azy ireny eny amin’ny tobim-piantsonana. Nomarihin’ity lehiben’ny tsenan’Anosibe ity moa fa tsy mitsahatra ihany koa ny fanentanana ireo mpivarotra ao anatin’ny tsena amin’izao mba hametraka jiro atiny sy ivelan’ny tsena hisorohana ireo karazana fanararaotana mety hitranga.